Chengetedza Utano Hwako Nehutano Hutsva Makore Matsarudzo ne Savings.Com - Fitness Rebates
musha » Blog » Chengetedza Utano Hwako Nehutano Hutsva Makore Matsarudzo ne Savings.Com
Pakupera kwaJanuary kunouya kuguma kwezvakawanda zveNyika Idzva. Isu tose tavepo: iwe watanga kubuda 2019 pane chinyorwa chakasimba, wakavimbisa kushanda zvakaoma uye kudya zvakanakisisa uye kuverenga mamwe mabhuku. Asi kamwe-kamwe, ndiFebruary. Masangano akare akafa, Super Bowl vhiki yekupedzisira inosvika, uye nenzira imwechete iwe unowira zvakananga kumashure ekugamuchirwa kwemaitiro ako ekare.
Kana izvi zvichitaurwa, usanetseka. Iwe unenge uine nguva yekugadzirira gore rako rakanakisisa zvakadaro.
Tora zvigadziro zvako zve 2019 kujekesa zvinangwa.
Kutarisa kunze kwehutano hwako uye kutsvaka zvinangwa zvako zvepfungwa zvinogona kutora chikwereti pahomwe yako. Mavhithamini uye zvinowedzera, zvokudya zvitsva uye gym memberships anotanga kutengesa, kunyanya kana izvo zvitsva zvemakore zvitsva zvinopera.
Chikonzero chinomesa, zvakare. Bhizimisi rako rekushandisa rinogona kutanga kunzwa sokuti rinokuseka iwe, uye icho chikafu chetsika chinogona kutanga kutora guruva.
Tine dzimwe sarudzo dziri nyore dzichaita kuti zvive nyore kugadzirisa zvakare kusarudza kwako uye kubatisisa pamitambo yako yekuita mafomu-pasina kuputsa bhangi.
Edza imwe nhamba yechinhu chitsva.
Kusiyana ndeyezvinonhuwira zvehupenyu, sezvavanotaura, uye izvo zvinotangira basa rako zvakare. Kana miitiro yako yepirates iri kutanga kutonzwa kusina kunaka, edza kuchinja zvinhu nemangwanani e kickboxing kana yega yoga panzvimbo yekuti.
Iwe uchashamisika kuti chinetso chemuviri wehutano chinogona kuitei kuti uvandudze utsi hwekutaura kwako, uye kuda kwako.
Saka zvakadini kana yakange iri imwe yezvinotonhora zvinotonhora munguva yemazuva ano? Musarega mamiriro ekunze ane utsinye anokuchengetedza kubva pakutsvaka zvinangwa zvako. Ona izvi chikwata chinobva kune zvakasimba kunze kwemachina engoro kufanana neWatchWarehouse uye Campmor, kwaunogona kuwana imwe yakakwana yetikiti, tende yekudzivirira kana yekutambira kuti iwe uende, pasinei nemwaka.
Tsvaga simba re smartwatch.
Dzimwe nguva, isu tose tinoda kusundira kubva kune teknolojia. Apo ganda rako remaoko risingagoni kukuudza nguva yacho chete, asi chengetedza mwoyo wako wekutengesa, matanho ako ezuva nezuva, nheyo yako yezviitiko uye zviyeuchidzo zvako, iwe unenge wakawedzera chikonzero chekutama uye kuramba uchitarisa parwendo rwako rwomufaro.
Our Health & Wellness Buying Guide inokupa imwe nzvimbo yekubvumira kuti ikubatsire kusvika kune zvinangwa zvako zve 2019, nepamusoro-gota gear pamatengo anonyanya kukosha.
Ita yako gamework gear game.
Kushaya kwemajasi ezvemutambo kunonakidza zvakakonzera iwe pasi? Kuchinja kwakanyatsofanana nekupenya kwako kunomhanya ne mutsva wechipiri sneakers kana kuwedzera imwe tangi yepamusoro kune kuchinja kwako kunogona kuvandudza chinangwa chako.
Buda pamubhedha usina kurohwa nekurova gym gumbo panzvimbo. Iwe unogona kuchengetedza chikuru pamusoro pekushanda kwepamusoro-soro yekupfeka, kunyange iwe uchiita se mamiriyoni mabhangi. Enda mberi, tora keke yako uidye zvakare (zvakanaka, inenge).
Shandisa inzwi rako.
Waiziva here kuti mimhanzi inokanganisa maitiro ako ekufambisa? Iwe unotanga kutanga warmup yako yakapoteredza 120 bpm-funga "Billie Jean" naMichael Jackson-uye oshandura maitiro ako zvichienderana nebasa rako, kubva pa 130-160 bpm kuti uenzanise nhanho yako.
Rwiyo runokurumidza runogona kukusimudzira kuti unyore-kuputsa nguva pamitambo yako yezuva nezuva, apo rwiyo rukuru, runyoro rwepakati rinogona kukubatsira iwe kuisa pfungwa pamusana-kusimudza nekuvaka simba rekutanga. Rzorodza mimhanzi yako, zororazve pfungwa dzako.
Kutsvaga mamwe mazano? Savings.com ine kusarudzwa kusingaperi kwekamboni uye kubhadhara kuchengetedza chikwama chako, uye zvisarudzo zvako.